Ukufaneleka kwezinkanyezi: 7 osaziwayo bezemidlalo - Indlela yokuphila 2022
Ukufaneleka kwezinkanyezi: 7 osaziwayo bezemidlalo
Imuphi umdlalo izihlabani ezikhetha ukuzigcina zilungile?
Izinkanyezi zingena ezemidlalo hhayi nje ukubukeka ziphelele kukhaphethi obomvu, kodwa nje ukuzijabulisa. Phela, ososayensi sekuyisikhathi eside befakazela ukuthi ukuvivinya umzimba kuthuthukisa imizwa.
UKim Kardashian uvamise ukujima ejimini noma ngaphandle nomqeqeshi womuntu siqu. Ngenxa yokubekezela kwakhe, wakwazi ukuncipha kakhulu ngemva kokubeletha.
Uhlu lwezithakazelo zezemidlalo lukaMadonna lubanzi impela: isibhakela, ubuciko bokulwa, ukuqeqeshwa kokuzivocavoca kanye ne-yoga. Ngokokuqala ngqa uMadonna waqala ukwenza i-yoga (i-Ashtanga yoga) ngo-1996 ngemva kokuzalwa kwendodakazi yakhe uLourdes. Kusukela lapho, ukuzindla kanye ne-asanas kusize umculi ukuthi ahlale esesimweni esiphezulu.
Ukuqeda amakholomu engeziwe okulandelela izingane, umculi uJennifer Lopez ungene ku-triathlon. Usanda kubuka umncintiswano we-triathlon ku-TV, futhi ngomzuzwana kamuva wanquma ukuhlanganyela emcimbini ofanayo.
Umculi uqedele ibanga le-triathlon ye-charity ngesikhathi samahora angu-2 imizuzu engu-23 imizuzwana engu-28.
Ngokumangalisayo, umklami uVictoria Beckham ngezinye izikhathi uhweba izicathulo ezinomusa zamateki. Nsuku zonke ugijima cishe amakhilomitha ama-3, bese eqeqeshwa ejimini nomqeqeshi. Ngaphezu kwalokho, ukugijima kunikeza uVictoria injabulo.
Umlingisikazi uCameron Diaz naye uyantweza. Akakwazi ukucabanga ukuphila kwakhe ngaphandle kolwandle namagagasi. Umdlali we-actress akazange ayeke ukusefa ngisho nangemva kokuba ephule ikhala izikhathi ezimbalwa.
Umlingisikazi u-Jenniffer Aniston uzame zonke izinhlobo ze-phineas, kodwa sihlala sikhona isikhala se-Pilates ne-yoga ohlelweni lwakhe oluqinile.
UModel Gigi Hadid uthathe isibhakela ngemuva kokuthuthela eNew York. Uthe efika ejimini wabona ukuthi usebhorekile emshinini wokuzivivinya. Ngokusho kwakhe, isibhakela asisebenzi nje kuphela umzimba wonke, kodwa nengqondo.
Izinkanyezi ezaduma ziseyizingane: 7 osaziwayo esasibazi siseyizingane
Abadlali abaningi baqala imisebenzi yabo besebancane. Abanye babo, ngemva kokuduma okukhulu, bakwazi ukwakha umsebenzi ophumelelayo, kanti abanye bahlupheka ngenxa yokuphumelela kwasekuqaleni
Ukufaneleka Kokunciphisa Isisindo: Amaphutha Amakhulu
Ukuze uthole okungcono kakhulu kwezemidlalo yakho, kufanele ugweme amaphutha amakhulu amantombazane amaningi awenza ejimini njalo
Okudliwa osaziwayo: Izinkanyezi ezingu-10 ezikhulume ngezitsha ezizithandayo
Ngokuqinisekile, wazibuza ukuthi yini osaziwayo abadlayo futhi yisiphi isidlo sabo esithandayo? Sifunde amaqiniso athile mayelana nokudla okuyintandokazi kosaziwayo baseHollywood
Isesekeli esinesitayela esithandwa yibo bonke osaziwayo bemfashini
Ama-fashionistas wangempela kufanele aqaphele ukuthi iyiphi into ethandwa kakhulu futhi kungani. Namuhla sibheka izithombe zezinkanyezi ezinebhande ezithanda ukuligqoka zonke
Kungani osaziwayo bekhetha ingubo ye-mesh ebuyele emfashini
Imfashini ihlale iziphinda, ngakho yonke into ebibalulekile ngeminyaka yawo-1990s kanye nama-2000s amnandi ibuya kaningi. Ngo-2019, kwaba yithuba lengubo ye-mesh, eyayivele isemfashini eminyakeni embalwa edlule